Mkpọchi - njikwa paswọọdụ na vault faịlụ, n'efu maka obere oge | Esi m mac
Anyị nọ na oge mgbe ihe niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile ga-echeta ọtụtụ igodo na okwuntughe maka ọrụ anyị na weebụ, Ozi, igwe ojii na ndị ọzọ. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ịnwe onye njikwa okwuntughe na-echetara anyị nke ọ bụla n'ime okwuntughe anyị nwere. Ee, maka na ọ baghị uru iji otu okwuntughe ahụ maka ọtụtụ akụkọ ebe ọ bụ na nke ahụ nwere ike iwetara anyị nsogbu otu o siri mee ọtụtụ ndị siri ike na ọbụlagodi ndị mmadụ amachaghị nke ọma. O doro anya na ọ bụrụ na anyị echee maka ngwa njikwa okwuntughe 1Password na-abata n'uche, mana anyị nwere ụzọ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị lelee ụlọ ahịa ahụ ma otu n'ime ha bụ Mkpọchi, nke bụ kpam kpam free maka obere oge mgbe emelite ka mbipute 1.2.1.
Nke a bụ ngwa dị mfe nke anyị nwere ike iji nweta okwuntughe anyị niile echekwara naanị otu nke dị ike karịa ma banye n'ụzọ dị otu a site na ịpị otu ederede na-enweghị icheta ha niile. O nwekwara ndọtị maka ihe nchọgharị anyị nke ọ ga-adịrị anyị mfe iji.
Na nwelite ikpeazụ, njehie na ụfọdụ chinchi nke etinyegoro ngwa a ka emeziri yana enwere ya n'efu maka obere oge. Mkpọchi nwere a mgbe price nke 19,99 euro na nke kachasị mma, ọ nwere ngwa n'efu maka ndị ọrụ iOS, ya mere emekọrịta mmekọrịta doro anya (anyị anwalebeghị ya mana ọ ga-arụ ọrụ) ọ gaghị efu anyị ihe ọ bụla n'oge a.
Nhazi nke ngwa na Mac anyi di mfe ma anyi nwere ike ọbụna jiri Dropbox ma ọ bụ iCloud nchekwa data. Enwere ike ịhazi nhọrọ a site na ntọala ngwa.
Ozugbo mfe Mbido nzọụkwụ Site na itinye okwuntughe nna anyi ukwu, anyi nwere ike i enjoyomi ya site na ichekwa okwuntughe maka ihe edeturu, akwukwo ma obu ihe obula anyi choro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » Mkpọchi - njikwa paswọọdụ na vault faịlụ, n'efu maka obere oge
Apple Campus 2 ga-enwe ọtụtụ ndị ọrụ karịa ka ebubere na mbụ